राजधानी लिस्बनमा मात्रै २००० भन्दा बढी घरविहीन, ३६१ जनाको सडकमै बास ! - VON TV
३ माघ २०७६, शुक्रबार ०१:४६ 476 ??? ???????
पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा मात्रै घरविहीन हुनेहरुको संख्या २ हजार नाघेको छ। घरविहीनमध्ये ३६१ जना सडकमै सुत्न बाध्य छन् भने बाँकी बाँकी “शेल्टर” मा बस्छन् , तर वास्तवमा उनीहरूको पनि घर छैन।
लिस्बनमा मात्रै घरबारविहीनहरूलाई मद्दत गर्ने ३१ वटा संस्थाहरु छन् जसले मुख्यतया खाना, कपडा, स्वच्छता उत्पादनहरू र स्वास्थ्य सेवाको वितरण गर्दछन् ।
लिस्बनको सडकमै खाने, बस्ने र सुत्ने मानिसहरुमा ८९ प्रतिशत पुरुष, १० प्रतिशत महिला र १ प्रतिशत अन्य लिंगी छन्। ति मध्ये आधा भन्दा बढि ५७.६२ प्रतिशत मानसिक समस्या रहेको र कुलतमा फसेका छन्।
लिस्बनको ऐतिहासिक क्षेत्रको सडकमा ३८.७ प्रतिशत बस्छन् भने राजधानीको मध्य क्षेत्रमा २६.६ प्रतिशत, राजधानीको पश्चिमी क्षेत्रमा १९.८ प्रतिशत र पूर्वी क्षेत्रमा १०.३ प्रतिशतको सडकमै बास छ।
सडकमै बस्ने घरविहीनहरुमा ७० प्रतिशत पोर्चुगिज नागरिक, ११.४ प्रतिशत युरोपियन नागरिक, ९.३ प्रतिशत अफ्रिकन मुलका र अन्य तेस्रो मुलुकका आप्रवासीहरु रहेका छन्। केही नेपालीको पनि सडककै बास छ।
सडककै बास भएका ४ जना नेपालीहरुको उद्धार गरी नेपाल पठाईसकिएको छ भने अझै केही नेपालीहरु ट्रेन स्टेशन, भग्नावशेष घर र सडकमै सुत्ने गरेको भेटिएको छ, जसमध्ये केहीको मानसिक समस्या रहेको छ भने केही कुलतमा फसेका छन्।
पोर्चुगलमा मात्रै ५० भन्दा बढी क्रियाशील नेपाली संघसंस्थाहरु छन्, जुन राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक र लैंगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। नेपालीहरुको साझा संस्था गैह्र आवासीय नेपाली संघ र नेपाली कन्सुलेट पनि छ, तर पनि सडकमा बास भएका नेपालीहरुको बारेमा खासै कसैले चासो दिएका छैनन्।
पोर्चुगलको सडकमा बास भएका नेपाली युवाको उद्धार गरी नेपाल पठाइयो !
एकातिर सडकमा बास भएका नेपालीहरुको पुनर्स्थापना गर्नु आफैमा चुनौती छ भने अर्कोतिर सडकमा बास हुने अवस्थाको सिर्जना कसरि भयो? त्यसलाई कसरि समाधान वा रोकथाम गर्न सकिन्छ, अर्को ठुलो चुनौती छ ।
सडकमा बास भएका हरेक एक नेपालीको बारेमा मिडियामा खबरहरु आएपछि मात्रै यहाँका संघसंस्था र सरोकारवालाहरु तात्ने र त्यसपछि फेरी सेलाउदै मंच र माईक मात्रै तताउने नियति नै बनिसकेको छ । अहिलेसम्म सडकमा वास भएका जति पनि नेपालीहरुको उद्धार गरिएको छ , ति सबैको समस्या मिडियाले उठान गरेपछि मात्रै भएको देखिन्छ । पोर्चुगलको नेपाली समाज र सरोकारवालाहरुले अब नेपालीहरुको सडकको बास हुने अवस्थाको पहिचान गरी त्यसलाई निराकरण गर्न वा बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीतर्फ उन्मुख गर्ने वा फुर्सदको समय सिर्जनशील तथा उत्पादन कार्यमा व्यतित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ ।
पोर्चुगलमा नेपालीहरुको जनसंख्या वृद्धि भएसंगै समस्याहरु र चुनौती पनि थपिदै गएका छन्। सरोकारवालाहरुको समयमै ध्यान जान जरुरी छ, नत्र समस्या झन् बिकराल हुने संकेत देखिन्छ।